Takaburitsa vhezheni itsva yeEmmabuntüs Debian Edition 3 1.0 | Linux Vakapindwa muropa
Anoteerera Emmabuntüs akaita chiziviso chekuvhurwa kweshanduro nyowani ye Kugovera kweLinux Emmabuntüs Debian Shanduro 3 1.0 iyo yakaburitswa munaGunyana 16 yegore rino uye yakavakirwa paDebian 10.1.0 Buster uye XFCE.
Panyaya yeUbuntu, Emmabuntüs yakavakirwa pane shanduro dzeLTS. uye inowanzo gadziridzwa pese panopera rutsigiro, ipapa ndiyo vhezheni yazvino yakavakirwa paUbuntu 16.04 LTS iyo ichine rutsigiro.
Kugoverwa uku kwakagadzirirwa kufambisazve kuisa patsva kwemakomputa akapihwa kumasangano masangano anobatsira, kusanganisira, pakutanga, nharaunda dzeEmausi (nokudaro zita racho).
Chinangwa ndechekusimudzira kuwanikwa kweGNU / Linux nevatangi, kuwedzera hupenyu hwechishandiso pakupedzisira kudzikisira tsvina inosanganiswa nekunyanyisa kudyiwa kwemidziyo.
1 Main nyowani maficha eEmmabuntüs Debian Edition 3 1.0
2 Dhawunirodha Emmabuntüs Debian Edition 3 1.0
Main nyowani maficha eEmmabuntüs Debian Edition 3 1.0
Mune iyi vhezheni itsva yekuparadzira nheyo dzeEmmabuntüs DE 2 dzakatorwa pasi peDebian 10 Buster, kunze kweizvozvo kuderera kwakakosha mukukura kwemufananidzo zvakare kwakamira system (kutora sereferenzi iyo Alfa neBeta vhezheni dzebazi iri)
Imwe yeshanduko dzakatanhamara mune iyi vhezheni itsva ndeye kutsetseka kwesoftware iripo pamwe nekuvandudzwa mukutungamira kwetema nerima theme.
Pane rimwe divi Ndinoziva zvakare kuti iwe unogona kuwana kuvandudzwa mune live mode rutsigiro, muchikamu chemutauro uye nenzvimbo, nezvimwe.
Uku kuburitswa kwekupedzisira kunopa UEFI Yakachengeteka Boot Mode yekuisa rutsigiro kuwedzera kune yakareruka kumisikidza kuburikidza neCalamares mune live mode uye shandisa muVMware Workstation, pamwe nekumwe kuvandudzwa maererano nekuchengetedzwa uye kuchengetedzwa.
Finalmente vanogadzira vanotaura kuti vari kuda kutsiva Emmabuntüs 3 vhezheni yakavakirwa paUbuntu 14.04 sezvo izvi zvichizopera.
Isu tinovimba iyi vhezheni nyowani ichaita kuti zvive nyore kunyatso repackages masangano anoshandiswa naEmmabuntüs neshamwari dzedu JerryClan anobva kuFrance ne Africa.
Kunyanya, shamwari dzedu kubva kuYovoTogo uye JUMP Lab'Orione vanomhanya 17 makomputa makamuri pasi peEmmabuntüs muTogo, gumi nemaviri ari muzvikoro zvesekondari.
Nokubatana kukuru uku, izvi zvinotibvumidza kudzidzisa pakati pe13,000 ne15,000 vana veTogolese gore rega, nekuda kwevagumi vemakomputa avo vanga vachidzidzisa mumasangano aya kwegore.
Iyi vhezheni itsva inozopedzisira yatsiva iyo Emmabuntüs 3 vhezheni yakavakirwa paUbuntu 14.04 iyo yanga yatoparara uye kunyanya kuti iyi vhezheni ichiri mumakamuri ekutanga emakomputa akaiswa muTogo neshamwari dzedu YovoTogo uye JUMP Lab'Orione.
Dhawunirodha Emmabuntüs Debian Edition 3 1.0
Kana iwe uchida kuyedza iyi nyowani vhezheni yeEmmabuntüs Debian Edition 3 iwe unogona kuwana mifananidzo yeiyo system mune ayo maviri maumbirwo mune yayo yepamutemo rondedzero pane sourceforge, chinongedzo ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Yakaburitsa vhezheni itsva yeEmmabuntüs Debian Edition 3 1.0